The Apple Watch dia tsy vonona mamingana ny iPhone amin'izao fotoana izao, nefa ny farany dia afaka manao modely mahatsiravina anjara irery rehetra: Amin'ny ankapobeny dia afaka hamela ny iPhone ao an-trano. Vakio ity lahatsoratra ity izay ahitàna fampahalalana feno momba ny fomba fampiasana Apple Watch tsy manam-pahefana amin'ny iPhone.
maro Apple Watch fampiharana dia tena hita ho an'ny zavatra fotsiny mihazakazaka amin'ny iPhone, ary ny sasany zava-nisongadina fototra tsy azo idirana ny eny vintana fa tsy mifanentana tany amin'ny iOS Gadget.
Aoka izany na tsy izany, inona ny Watch atao miantehitra amin 'izay anananao modely manokana. Ohatra, ny voalohany Watch tsy manana GPS hetra, koa raha tsy ny telefaonina manodidina anareo dia tsy afaka manaraka ny fisarahana ianao estimating dingana efa lasa. Ho ambany dia miresaka anao ny alalan 'ny zavatra atao ny Watch.
Sintomy ny app ho an'ny Window sy PC
wps wpa tester ho an'ny pc
Sintomy ny Inshot ho an'ny PC
misintona joox ho an'ny solosaina finday
gcmob ho an'ny pc
v380 ho an'ny pc
facetime ho an'ny Windows 10
1 Ny fomba fampiasana Apple Watch tsy misy Pairing iPhone
1.1 Hanara-maso ny Run
1.2 Manara-maso ny swims
1.3 Update ny fangatahana
1.5 Mandehana eo amin'ny fiaramanidina na mandeha mba hizaha ny sarimihetsika
1.6 Mihaino mozika, Audiobooks na Podcasts
1.7 Manara-maso ny Fitness sy ny Fahasalamana
2.1 Bebe kokoa avy amin'ny tranokalako
Ny fomba fampiasana Apple Watch tsy misy Pairing iPhone
Hanara-maso ny Run
Ary tamin'ny eny vintana fa manana GPS-afaka Apple Watch (Series 2 manomboka) dia afaka manaraka ny mihazakazaka tsy mandray ny telefaonina miaraka aminao, sy ny fitandremana ao an-tsaina fa tsy afaka stream Apple Music amin'ny tsy Cellular modely azonao dika mitovy mozika ny Mijere ary hihaino izany na dia amin'ny Bluetooth earbuds raha mihazakazaka ianao.
Manara-maso ny swims
Io ankehitriny ny olona tsy azo nidirana ny Series 1 tompony, Natahotra izahay: ny Watch tsy mahazo rano mandra-fanoherana Series 2, izay manome hery anao mba hanao izany ianao raha mbola milomano.
Milomano ihany Apple manaraka izany dia toa fototra, mbola misy be dia be ny vahiny fangatahana mba hifanaraka fepetra takiana mialohan'ny ahafahana tsirairay.
Update ny fangatahana
Original Apple Watch fampiharana no tena aseho fotsiny: ny tena fampiharana nanao ny asany rehetra eo amin'ny iPhone sy ny Watch nampiseho anao fotsiny ny vokatra.
Niova izany tamin'ny watchOS 2, izay nanolotra an-toerana fampiharana: izay, fampiharana izay tena nihazakazaka teo amin'ny Apple Watch.
Apple rehetra Watches mihazakazaka watchOS 2 na tatỳ aoriana, dia afaka manana fampiharana mamelombelona amin'ny alalan'ny Wi-Fi, ary ny sasany fampiharana toy izany koa dia afaka mahazo ny amin'ny alalan'ny finday mandamina ny GPS + modely finday.
Raha efa nanangana Apple Pay amin'ny iPhone ny Watch fampiharana, azonao atao ny mandoa vola ho an'ny zavatra tsy nanantena manana ny iPhone manampy. Izay eo ny antony fa ny fampiharana manao famantarana miavaka izay misao amin'ny Watch ampiasaina ho toy ny karatra laharana – mamela anao hampiasa Apple Pay Na ahoana na ahoana, ianao rehefa miala amin'ny telefaonina.
Mandoa, ankapobeny hanevaheva ny fiambenana amin'ny Apple Pay-tonga lafatra misy fanafany intsony ary aoka ny tanteraka NFC (Near saha fifandraisana) fampielezam-peo hanao ny zavatra.
Mandehana eo amin'ny fiaramanidina na mandeha mba hizaha ny sarimihetsika
Apple Wallet eo amin'ny Apple Watch, ka na inona na inona teo aloha napetrany tao aminy – fiaramanidina tapakila, tapakila elektronika, ary na inona na inona hafa vakiana – tokony hiasa tsara sy tsy misy ny iPhone Dandy.
Nampalahelo, tsy ny rehetra no nahatakatra izany fikambanana, Noho izany dia mbola tsy tapaka ianao Meandering manodidina amin'ny paosy sy ny satchels feno plastika, na izany aza, isika dia mitandrina kokoa ny zavatra mandeha ordinatera.
Mihaino mozika, Audiobooks na Podcasts
Ny Watch manana ny fitehirizana, ny sasany izay dia tsy ho azo ho an'ny mozika – mba hahafahanao mampiasa ny Watch ny naorina-in Bluetooth ny mpivady amin'ny roa lavitra earphones ary hahazo mozika mampihetsi-po.
Raha ny mahazatra dia tsy manana ny safidy mivantana mozika avy izay miendrika ho Spotify na Apple Music tsy misy sela modely, mbola misy izay rehetra mety ho ilaina ao anatin'ny manangona ny hazakazaka, ny fanatanjahan-tena na fohy fiara. Raha toa ianao mampiasa Apple Music afaka manao Playlists azo idirana no tapaka amin'ny Apple Watch.
Misy ny fampiharana vahiny hafa toy izany koa dia afaka manao izany koa, ohatra, Tabataba re izay mba hahafahanao mitahiry ny boky noraisim-peo eo amin'ny hato-.
Manara-maso ny Fitness sy ny Fahasalamana
The Apple Watch tsy mila mpivady amin'ny iPhone mba ahantòny ny hanin-kotrana na ny fanatanjahan-tena: dia afaka mitahiry ny vaovao sy synchronize ho an'ny Fahasalamana fampiharana rehefa miverina avy amin'ny hazakazaka, tsingerin'ny na mientana ho amin'ny Rec foibe. Misy toy izany koa vahiny hafa Wellness rindrambaiko azo idirana, ohatra, sakafo.
The Series 4 modely maka zavatra be kokoa amin'ny manaraka fitepon'ny fony mandroso bebe kokoa ary na dia latsaka toerana, izay modely sela afaka mampiasa ny mampitandrina ny olona sahaza ao amin'ny hetsika izay manana mahatsiravina lavo.
Vakio ity lahatsoratra ity, izay ahitana vaovao momba ny tanteraka Ny fomba fampiasana Apple Watch Tsy Pairing ny iPhone. Eto dia hahazo asa samy hafa rehetra azonao atao mampiasa ny Apple Watch tsy miaraka tsiroaroa amin'ny iPhone.
Aloha Browser + VPN maimaim-poana ho an'ny PC (Windows 7/8/10 / Mac)
Hotstar Ho an'ny PC Download
Sintomy ny Vidmate ho an'ny PC , Windows 10 | 8 |7 | XP
Plus Messenger Ho an'ny PC / Mac / Windows 7/8/10 / Computer
DU Recorder ho an'ny PC, Fampidinana Mac sy Windows
Sokajy Download Facetime
Anarana Email Website
Gramblr Ho an'ny Windows Windows 10/8/7 - Ampidino ny kinova farany
Ampidino Turbo VPN amin'ny PC Window 7, 8 & 10
Misintona ho an'ny PC
Ampidino ny Facetime For PC
fampiasa amin'ny pc
Sintomy ny Facetime ho an'ny Window
Inshot Ho an'ny PC
es file explorer an'ny pc
fahendrena ho an'ny pc
boaty izao tontolo izao pc
Copyright © 2021 Lisitry ny vidin'ny gym